MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: Military Devadatta
အခုတော့....... ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှု အခြေအနေကတော့ ရင်လေးစရာပါပဲ။
ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါစို့ ...။ ။
Posted by Nyo Gyi at 5.8.09
Labels: 8888, OTHERS' WRITINGS, SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION
I 1988, at which hall, RIT student was killed by Army? Need to be cautious when you post something which lead to mistaken by people.
As an ethic of an editor, i should not post unsure data.
So, I correct this error.
Thanksalot, thet.
ဘယ်ခန်းမမှာလဲမသိပေမဲ့ တကယ်ပစ်သတ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ သွေးမြေကျခဲ့တာ တကယ်ပါပဲရှင်။
REVOLUTION POEMS (တော်လှန်ကဗျာများ) - 2
8888 Of Our Town